Waraana Tigraay: Lola naannoo Affaariin namoonni kumaatamni qe’eerraa buqqa’an – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaraana Tigraay: Lola naannoo Affaariin namoonni kumaatamni qe’eerraa buqqa’an
Waraana Tigraay: Lola naannoo Affaariin namoonni kumaatamni qe’eerraa buqqa’an
Naannoo Affaar keessatti guyyoota afran darbaniif lolli jabaan humnoota Tigraay fi Raayyaa Ittisa Biyyaa akkasumas humna addaa fi milishaa naannolee jidduutti adeemaa jiraachuu gabaasaaleen bahaa jiran ni mul’isu.
(bbcafaanoromoo)—Lola kanaan yoo xiqqaate namoonni 70,000 ta’an qe’ee isaaniirraa buqqa’uu mootummaan naannoo Affaar beeksisee jira.
Waraanni baatilee saddeetiif mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti Tigraay keessatti adeemaa ture torban darbe gara naannoo Affaaritti cehe.
Raayyaan Ittisa Biyyaa Itoophiyaa ibsa Roobii baaseen lola naannoo Affaar keessatti gaggeeffameen humnoota Tigraay irratti olaantummaa argachuu beeksiseera.
Humnooti Tigraay gama kaaniin haleellaan naannoo Affaar keessatti raawwatan humna addaa fi milishaa naannoo Oromiyaa irraa lolaaf garas imalerratti kan qiyyaafate akka ture himan.
Naannoon Affaar waa’ee namoota buqqa’anii maal jedhe?
Lola Sanbata Adoolessa 17 bara 2021 irraa eegalee naannicha godina Afur Aanaa Fantirasuu Yaaloo jedhamutti adeemaa jiruun namoonni kumaatamni buqqa’anii rakkoof saaxilamuu mootummaan naannoo Affaar beeksiseera.
Aanaan kun bakka naannoon Affaar naannolee Tigraayi fi Amaaraa waliin wal daangessutti argamti.
“Humnoonni Tigraay daangaa cabsanii seenuun hawaasa horsiisee bulaa naannichaa waliin walitti bu’ani,” jedhu hogganaan biiroo Ittisa Balaa fi Wabii Nyaataa naannoo Affaar Obbo Mohaammad Huseen.
Roobii galgala BBC’tti wayita dubbatan, odeeffannoo qabaniin aanaalee akka Goolinaa, Awuraa fi Awunaa Teeruu dabalatee walumaagalatti namoonni 70,000 ol sababa lola kanaatiin qe’ee isaaniirraa buqqa’uu himan.
Lolichi babal’achaa yoo deeme lakkoofsi namoota buqqa’anii dabaluu danda’a yaaddoon jedhu jiraachuu eeranii, “walumaagalatti namoonni miliyoona walakkaa ta’an yaaddoo keessa jiraachuu UN fi dhaabbilee deeggarsaaf ergaa dabarsineerra,” jedhan.
Akka aanga’aan kun jedhanitti namoonni buqqa’an hedduun manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa keessa qubatanii kan jiran yoo ta’u, gariin gara magaalota gurguddoo akka Samaraa fi Loogiyaa firoota isaanii biratti baqatan, gariin ammoo bosonaa fi holqa keessa dhokatanii jiru.
Mootummaan naannoo namoota kuma tokko ta’aniif deeggarsa nyaataa fi uffannaa kan godhe yoo ta’u mootummaa federaalaa fi dhaabbilee gargaarsaatti iyyatanii deebii eegaa akka jiran dubbatu Obbo Mohaammad.
Lola naannoo Affaaritti guyyoota muraasa darban gaggeeffameen namoonni nagaa miidhaman jiraachuu jiraattonni BBC’tti himaniiru.
Dubbi himaan TPLF Obbo Geetaachoo Raddaan garuu lola naannicha keessatti adeemsifamaa jiruun lammilee nagaa irratti akka hin qiyyaafanne dubbatu.
“Lolli keenya uummata cunqurfamaa Affaar ykn Amaaraa ykn kaan waliin miti, milishaa isaanii waliinis miti,” jechuun Twitter gubbaatti barreessan.
የትግራይ ሰራዊት የድል ግስጋሴ ቀጥሏል። እነኣቢይ የቀሯቸውን የተወሰኑ መደበኛ ክፍለጦሮች በኣዲስ ምልምል እየሞሉ ቢልኩም ምንም ለውጥ ሊያመጡ ኣልቻሉም። እነአገኘሁ ተሻገር ሓፍረታቸውን ዋጥ ኣርገው ከየክልሉ የጠሯቸውን ልዩ ሃይሎችና የኣማራ
— Getachew K Reda (@reda_getachew) July 21, 2021
Mootummaan federaalaa gama isaatiin lola naannoo Affaaritti gaggeeffameen gareen TPLF daa’immanii fi dubartoota waraanaaf hiriirse jechuun himateera.
TPLF reeffa daa’immanii fi dubartoonni 300 lola irratti ajjeefamanii namoota nagaa jumlaan ajjeefaman fakkeessuuf fe’ee gara Maqalee ittiin gala jira jedha maxxansi fuula twitter qulqulleessa ragaalee mootummaa federaalaa.
Fake massacre in the making by TPLF pic.twitter.com/pdImn2FkSv
— Ethiopia Current Issues Fact Check (@ETFactCheck) July 22, 2021
Naannoo Affaariin alatti naannoo Amaaraa dhiyeenya magaalota akka Qobboo fi Woldiyaatti lolli adeemaa jiraachuu gabaasaaleen ni eeru.
Gabaasaalee kanneen haala walaba ta’een mirkaneeffachuun rakkisaadha.
Tibbana konkolaattonni deeggarsa fe’anii gara Tigraay imalaa turan haleelamuu fi kunis hojii deeggarsa dhiyeessuu rakkisaa akka taasisu UN beeksisee ture.
BREAKING NEWS Sadaasa 29/2020 Lola Tigraay Update
#BREAKING NEWS Sadaasa 29/2020 Lola Tigraay Update Ganamaa kaasee Tigraay keessatti kallattii hundaan lolli…
Lola Milishoota Naannoo Affaariin Oromoo Walloo irratti adeemsifamaa jiru:
Lola Milishoota Naannoo Affaariin Oromoo Walloo irratti adeemsifamaa jiru: Duguuggaan sanyii Oromoo Walloo irratti, Milishoota…
Naannoo Uummattoota Kibbaa Godina Koonsootti, jiraattonni nagaa ajjeefamuufi qe'eerraa
Naannoo Uummattoota Kibbaa Godina Koonsootti, jiraattonni nagaa ajjeefamuufi qe'eerraa buqqaafamuun hammaachaa dhufuudhaan hanga ammaatti maatiin…
A new video of the places that were fought today and pushed each other
Abiy Ahmed and his council have made planting trees after he ended a meeting about the achievement of the budget year 2013.